ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola basePortugal UBernardo Silva Ibali leBantwana leNdaba ye-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiza;'UMesiya'. Ibali lethu leBernardo Silva Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts kuletha i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kumntwana wakhe kuze kube ngumhla. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye.
Ewe, wonk 'ubani uyazi malunga noBernardo Silva amakhono okudlala okuphambili kodwa bambalwa bacinga ubomi bakhe ngaphandle komdlalo othakazelisayo. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, vumela uqale.
UBernardo Silva Ibali leBantwana Ubungqina be-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UBernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva wazalwa nge-10th ka-Agasti, i-1994 Lisbon, Portugal Mota Veiga Silva (uyise) noMaria João Silva (unina).
Njengenkwenkwana, wakhula exhasa uBenfica. Wayeyinto ebomvu into ephakamileyo ye-IQ. Isimo sakhe sengqondo kunye nomsebenzi onzima ngumqathango wokuba uhlala phi namhlanje kwibala lebhola.
Waqala umsebenzi wakhe webhola lebhola njengeminyaka eyisibhozo ubudala kwaye ekugqibeleni waqhubela phambili kwinkqubo yolutsha ngaphambi kokuba enze iqela lakhe kuBenfica B kwinqanaba lesibili lebhola lePortugal kwi-2013. UBernardo waqanjwa ngegamaMessizinho ' kwaye 'UMesiya' ngenxa ye talente enkulu.
UBernardo Silva Ibali leBantwana Ubungqina be-Untold Biography Facts -UJorge Mendes nguMmeli wakhe
UBernardo ngumxhasi kwihlabathi lonke walila uJorge Paulo Agostinho Mendes. I-Mendes iphakathi kwee-agents ezichaphazelekayo zebhola kwihlabathi, kunye nabathengi kubandakanya Cristiano Ronaldo, UDavid de Gea, Diego Costa, UJames Rodríguez, UMarcos Rojo kunye UJosé Mourinho. Ngokuqhelekileyo ubizwa ngokuba "Ophezulu".
Uthiwe igama Agent Best of the Year kwi-Globe Soccer Awards amaxesha amathandathu alandelayo, ukusuka kwi-2010 ukuya kwi-2015. U-Mendes waqala njengomdlali webhola lebhola kodwa wanyanzeliswa ukuba alahle ithemba lakhe lo msebenzi emva kokuba enqatshelwe ngamaqela angamaPutukezi xa wayekho kwi-20 yakhe yokuqala. Esikhundleni salokho, wagijima kwisitoreji sokuqeshisa ividyo, wasebenza njenge-DJ waza wavula ibha ne nightclub eCaminha, umasipala ngasentla-ntshona kwePortugal.
Abaninzi bakholelwa ukuba umdlali uza ku-Manchester United xa ephuma eMonaco, ngenxa yokudibanisa no-Jorge Mendes - ophethe i-super-agent. UGaldiola wayinqobe le mpi kumntu owammchukumisa ngexesha lokulahleka kwe-5-3 yaseMonaco emlenzeni wokuqala we-Champions League kwikota yokugqibela.
UBernardo Silva Ibali leBantwana Ubungqina be-Untold Biography Facts -Kanye Ngasekhohlo
UJorge Jesu waseBenfica wafezekisa izinto ezinkulu kwiqela lakhe. Kodwa nanamhlanje amaqela eklabhu ahlala ebaluleke kakhulu ngokungahambi kokholo kwiitalente ezisekhaya, kunye noBernardo Silva akhulume ngokucacileyo njengomzekelo omhle.
Akazange akholelwe ngumdlali omncinci. Ngexesha elithile, uJorge Yesu wamvumela uBerardo ukuba adlale nje imizuzu eyi-31 emithathu kwimidlalo yokuqala yeqela likaBenfica. UBernardo Silva ngokwakhe usandul 'ukuvuma ukuba phantsi kukaYesu 'akukho nethemba lokuphazamisa uhlangothi lukaBenfica', esithi: "Xa uJorge angifake ukuqeqeshwa ngasekhohlo eBenfica, ndaqonda ukuba andinayo ikamva kwiqela."
UBenfica wayeyilungu lebhunga uBernardo elithandekayo entliziyweni yakhe. Ndithandekile entliziyweni yakhe yokuba unesiqu sabo 'E Pluribus Unum' wayibhala ngeso lengalo. Amaphupha akhe kunye nawo apheliswa nguJorge Yesu.
UBernardo Silva Ibali leBantwana Ubungqina be-Untold Biography Facts -Amagama afanayo, uhlobo olufanayo lomdlali, abahlobo abalungileyo
Umdlali odlalayo xa efika kwisiXeko ukuba akayi kuba yedwa uSilva kwiqela leemidlalo. Bobabini baba ngabahlobo abangcono xa bebona ukuba babelana ngamagama afanayo kunye nobuntu kunye neempawu kwibala. Bobabili banomdla okhohloweyo, iliso lokupasa, isikhulu esiphantsi sogonyamelo kunye nekhono lokubhukuda eliye laxhathisa izikhuselo zenkcaso.
UBernardo Silva Ibali leBantwana Ubungqina be-Untold Biography Facts -Ubuthongo bokulala kunye noBulumko
UBernardo Silva uchitha ixesha elisezantsi phantsi kwamehlo avaliweyo malunga neyure emva koqeqesho loqeqesho. Ukuphucula amandla akho okucinga kunye noxanduva lwakhe lobulumko kwi-pitch. Oku kwenza ukuba abe ngowona unobulumko kwiimpawu zehlabathi. Ubulumko bakhe bubonakala nakwiimpendulo zakhe ezinengqiqo kunye neengxelo ezifanelekileyo kwiintatheli.
UBernardo Silva uye wabonisa iqela elithile lalo dolophu ukuba likwazi ukulungelelanisa ilizwe elitsha, ulwimi olutsha kunye nenkcubeko entsha. Usetyenziselwa ukuhamba kwebhola. Ukumisela ngokukhawuleza eFransi ngoxa wayesemncinci kwakumnceda ukuba akhule njengomntu.
Ngenhlanhla wafunda ulwimi lwesiNgesi ngaphambi kokuba ephuze ukuza eNgilani. UBernardo unengqiqo kwaye ubume bakhe bokulala emva kokuqeqeshwa kumnika amandla okucinga ngezidingo zakhe, ngoko ke "Yenza utshani ngelixa ilanga likhanya".
UBernardo Silva Ibali leBantwana Ubungqina be-Untold Biography Facts -Umdlali we-League 1 woNyaka 2016-2017 Ixesha
Kufuneka ukuba ube nguSilva, ngokuchasene noEdinson Cavani, owathatha isihloko seLigue 1 Player of the Year, kodwa ngenxa yokuba uMonaco wayenenkwenkwezi ezininzi, ivoti yabo yayingabelana. Le ngqiqo evela injongo.
Kuzo zonke iziqhubi ezakhayo kwicala laseMzantsi France kule nkqubela, nangona kunjalo, kwakungumPhuthukezi owawunomdla ngokugqithiseleyo kwithuba lophulo.
Iqela lakhe langaphambili-iqabane likaFinfrey livuma ngoFebhuwari, i-2017: "Mhlawumbi ilungu elibalulekileyo leqela. Xa kuthelekiswa nezilwanyana ezinjengeRadamel Falcao kunye neKylian Mbappe, igalelo lakhe lingaqhelekanga lula. Emva koko, akayena umdlali onamanani amaninzi. Ngokulinganayo, akanikeli i-swagger, ukuxhaphaza okanye amandla okuthandwa nguBenjamin Mendy okanye iTyemoue Bakayoko. Xa ndifika eMonaco ngo-2014, andingazi ukuba kuya kuhamba njengaye. Eneneni, wafika engaziwa eFransi. Ndaphakanyiswa bamsayina emva komdlalo omnye kunye neqela likaBenfica. Namhlanje, ube yinto enye.
UBernardo Silva Ibali leBantwana Ubungqina be-Untold Biography Facts -Uhlala ngonaphakade
UBernardo Silva uye wavuma ukuba unomvuzo omkhulu ULeonardo Jardim ngubani ofana noyise kunomqeqeshi wangaphambili.
Ngamazwi akhe... "Ngokomntu, uJardim undinike kakhulu," UBernardo Silva uqinisekisa. "Usebenza kakuhle nabadlali abancinci. Wabona ukuba ndimncinci kwaye wandinika ithuba. Kwintloko yam, ndaziva ndihluke. Ndiphucule kwiinyanga ze-3 nje zokujoyina iqela laseFransi. "
UJadim wamthanda kakhulu kangangokuthi wamenza inombolo yenkcubeko ye-10 kwiqela emva kokuqala ukumnika i-15 shirt. Isizathu kukuba wayemthanda inyawo lakhe elisekhohlo elincinci, ukunyakaza kwakhe kunye nezakhono zokuqhawula. UBernardo wenza iziboniso ze-132 kwi-Monaco, encedisa iKlabathi kwisihloko seLigue 1 kwi-2016 / 17.
I-Raphael Guerreiro Ibali loBuntwana leNqaku leNgcaciso yeNdaba yeNqaku leNgcaciso yeBantwana
I-Ricardo Pereira Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
UBruno Fernandes Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts
I-Diogo Jota yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: nge-16 kaJuni, ngo-2020
Umhla oLungisiweyo: nge-17 kaJuni, ngo-2020
Joao Moutinho Ibali leBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo
U-Andre Silva Ubuntwana Ibali Plus Untold Biography Facts